Home Wararka Ciyaaraha Rio Ferdinand ayaa amaanay sida ay Real Madrid ula dhaqantay halyeeyada kooxda...
Daaficii hore ee kooxda Manchester United Rio Ferdinand ayaa amaan kala dul dhacay kooxda Real Madrid kadib markii uu ka tagay Sergio Ramos . Real Madrid ayaa u diyaarisay xaflad sagootin ah oo gaar ah Ramos taas oo ka soo muuqatay dhamaan koobabka uu 35 jirka daafaca ah ku guulaystay wakhtigiisii ​​Bernabeu.
Ferdinand ayaa bartiisa Twitter-ka ku amaanay sida ay Real Madrid ula dhaqantay daafacaan, kaasoo ka tagay kooxda isagoo ka mid ahaa xiddigihii ugu fiicnaa ebid.
Ferdinand ayaa bartiisa Twitter soo dhigay:
“Qaabka ay Real Madrid u soo bandhigto saxiixyadeeda Galactico iyo halyeeyada marka ay baxayaan runti waxay sare u qaadeysaa xaaladdooda mid ka mid ah kooxaha aadaya. Iyaga ayaa hogaanka u haya sameynta labadan shay.”
Sergio Ramos ayaa 16 xilli ciyaareed ku qaatay Real Madrid, isagoo kula guuleystay 22 koob, oo ay ku jiraan shan horyaal oo La Liga ah iyo afar Champions League.
Ciyaaryahankii hore ee reer England ayaa rumeysan in sida Real Madrid ula dhaqantay halyeeyadooda ay tahay mid ka mid ah sababaha ay ciyaartoy da ‘yarta ah ugu boodaan fursada ay ugu dhaqaaqayaan Bernabeu.
Xafladii sagootinta ee Real Madrid ee Sergio Ramos waxaa ka soo qayb galay qoyskiisa oo ay weheliyaan guddiga maamulka ee kooxda si loogu dabaaldego xirfad keentay in Ramos uu 671 kulan u saftay 16 xilli ciyaareed.
Previous articleLiverpool oo u aqoonsatay xiddiga La Liga inuu yahay bedelka mustaqbalka ee Roberto Firmino
Next articleXulka England oo Bar-baro kala kulmay Xulka Scotland Euro 2020